Home Wararka Midowga Musharaxiinta oo Qoraal xasaasi ah u gudbiyay shira Golaha Wadatashiga
[Akhriso] Midowga Musharaxiinta oo Qoraal xasaasi ah u gudbiyay shira Golaha Wadatashiga
Midowga Musharaxiinta oo maanta ka qeyb galay shirka Doorashooyinka ayaa u gudbiyay Madasha cabashooyinka aay qabaan. Warqad ka soo baxday Midowga Musharaxiinta ayaa lagu faahfaahiyay cabashadaas taasoo ka kooban
Amniga Dalka iyo Doorashooyinka.
Iyagoo sheegay In Raysalwasaaraha iyo golaha wasiirada ay si buuxda masuul uga noqdaan amniga dalka, madaxweynihii horena uu ku ekaado murashaxnimadiisa, sida uu dhigayo dastuurka kmg ah, waa in Ra’iisul Wasaaraha iyo xukuumadiisa ay xaqiijiyaan in ciidanka laga dhex saaro arrimaha siyaasadda.
Golaha Midowga Musharraxiinta wuxuu halkan idinku soo gudbinayaa soo jeedin ku aaddan sixitaanka hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashooyinka. Goluhu wuxuu adkaynayaa in la saxo habraaca doorashada, si ay natiijadeeda u noqoto mid la aqbalo, dalkana deggenaan iyo xasillooni u horseedda. Odayaasha dhaqanka
Previous article[DEG DEG] Dagaal ka qarxay Dhuusomareeb
Next articleMaxkmadda CQS oo Dil toogasho ah ku xukuntay askartii dishay “Sakariye iyo Sowda”
Maxaa Looga Hadli-doonaa Kulanka Maanta ee Golaha Shacabka?
Xariga Muqtaar Roobow oo Khilaaf Ka Dhex Dhaliyay Madaxda Koonfur Galbeed...